Maitiro ekuchimbidza KDE, nekukurumidza uye nyore | Kubva kuLinux
KDE ndiyo inogona kunge izere rakazara desktop desktop yeLinux. Inopomedzerwawo kuti ndiyo inoshandisa zviwanikwa zvakanyanya.Kuti ikurumidze, hunyengeri ndehwokuderedza zvimwe zvezvinhu zvacho, asi hazvishanduke kuita zvakashata desktop.
1 Ita shanduko otomatiki
2 Ita shanduko "neruoko"
Ita shanduko otomatiki
Akaderera Mafuta Zvirongwa anovimbisa kuwedzera iyo mhanyisa uye kudzikisa ndangariro kushandiswa kweKDE. Pasuru iyi inonzi Kubuntu-Low-Fat-Zvirongwa, inopa seti yesarudzo dzekumisikidza dzinoedza kudzikisa kushandiswa kwendangariro pamwe nekumhanyisa KDE kurodha nguva ne32% uye 33% zvichiteerana.
Zvimwe zvegadziriro zvinosanganisira:
Kuumbwa kwakabviswa nekutadza
Iyo inoremadza iyo otomatiki kurodha emamodule akasiyana, senge bluedevil, iyo yemahara nzvimbo notifier, mamwe maNepomuk masevhisi uye zvimwe zvikamu.
Iyo inoderedza huwandu hweKRunner default plugins ayo anotakurwa otomatiki.
Inoderedza huwandu hwemifananidzo yakajeka inoshandiswa mukushongedza kwehwindo.
Icho chinangwa chepakeji ndechekutendera vashandisi vane yekare hardware mukana wekumhanyisa Kubuntu desktop padanho rinogamuchirwa.
Kuisa package yacho chete:
sudo apt-tora kuisa kubuntu-yakaderera-mafuta-zvigadziriso
Ita shanduko "neruoko"
Ivo vasina Kubuntu vanogona kuita shanduko neruoko. Muvhidhiyo inotevera akati wandei anoratidzwa:
Kuti uwane rumwe ruzivo, ini ndinokurudzira kuverenga Ubuntu Foramu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Maitiro ekuchimbidza KDE, nyore uye nekukurumidza
Mukutaurirana neimwe ye Klyde boosters (yechinyakare imwe nzira KDE kurongedza, inokurudzirwa nevaviri OpenSuse vanogadzira), muchengeti weKwin akataura kuti zvaive zviri nani, kuitira kudzikama, kuchengetedza kuumbwa kushande uye kudzima zvese graphic mhedzisiro. .
Nenzira iyi, Kwin kushandiswa kunoderedzwa pasina kukanganisa kugadzikana; kuremadza kuumbika kuchaperawo mhedzisiro uye kunotora zviwanikwa zvishoma, asi kudzikama kwaKwin kunogona kukanganisika.
Pindura kuna Dah65
Ndiri kutya nepesenti yeCPU yekushandisa iyo mukomana ari muvhidhiyo anayo pakombuta yake. Iyo ine processor yako inomhanya inopfuura 50% nguva dzese uye ine macores maviri. Yangu ndeye P4 3.2 Mhz ine makore angangoita gumi nematatu (akura kwazvo asi ini ndakura mazambiringa) zvakare nema cores maviri (one virtual) uye necomputer yeiyo visualized system ini handisvike anodarika 13%, paavhareji mira nemodi Ndiri pakati pe8 ne0.5%, YouTube pa1p inoridza mavhidhiyo ine 360% CPU yekushandisa.
Ini handigone kutaura chero chinhu nezve RAM, pamwe nekugadziriswa iko kushandiswa kwakafanana.
Ndatenda zvikuru nekuda kwekujekesa uku, zvakajairika kuona kuremara kuzere kwemhedzisiro yedesktop mune iyi mhando yezvidzidzo zvekuchengetedza KDE kushandiswa.
Rodolfo A. González M. akadaro
Mushure mekuverenga akati wandei KDE makoramu pane blog, uye nekuda kwekumanikidzwa shanduko yemidziyo, ndakafunga kuyedza KDE mushure memakore ekushandisa Gnome, zvese zvaitaridzika kunge zvakanaka kwazvo, ini handina kana matambudziko ezvekushandisa, Core i5 6Gb ye RAM, asi chii chinoramba ini kudzokera kuGnome ndiko kunogumira neKio, ini ndoda kugadzirisa zvakananga mafaera kubva akasiyana maseva ari kure, FTP, SSH, SMB, asi havazi vazhinji vapepeti vanotsigirwa naKio.
Asi sedesktop yemumwe munhu anobva kuWindows nharaunda, yakanaka kwazvo kwazvo, ine yakachena dhizaini dhizaini uye kwandiri inonzwisisika.
Pindura Rodolfo A. González M.
Kunze kwekuda kuziva: kuisa mafolda ari kure neDolphin haugone kugadzirisa iwo mafaera?
Kumba ndine muchina wepakati zvakare iri seNFS server, uye malaptop anokwanisa kuwana nekugadzirisa mafaera pamushini wepakati.
Chaizvoizvo mhinduro iri hongu, asi chete nevapepeti vanotsigira Kio. Mune yangu kesi ini ndinoshandisa Sublime, uye kana ini ndikagadzirisa iyo faira uye ndochengetedza, shanduko hadziishandiswe kune yenguva pfupi faira pakombuta yangu, shanduko dzinoiswa kunyangwe pandinovhara Sublime, ine Kio meseji inondiudza kuti iyo faira yakagadziridzwa uye kana ndichida kusevha shanduko. Unogona here kufungidzira uchishanda mu php seizvi?
Zvinoenderana nekuti unonamira sei, kana iwe uchinyora vhidhiyo mbishi, pasina kumanikidza haizopedze chero chinhu, asi kana panguva imwechete iri kurekodha, iri kumanikidza vhidhiyo, saka zvine musoro kuti ine CPU kushandiswa
Icho ichokwadi chaizvo, ndatenda zvakare.
Ndakamboita bvunzo iyoyo kumberi uye processor haina kumbondipa mavhareji akadaro. Zvisinei hazvo ndatenda nekujekeswa.
zviri pachena kuti iwe uchave uine processor pa50% nguva dzese ... iri kurekodha desktop yako ...
Mupiro wakanaka kwazvo! Ndatenda
Ini handina kukunzwisisa chaizvo XD asi wakamboedza neine musoro zvinongedzo? ln -l
yepamusoro ln -L
Ratidza Baterry Percentage